Izinzuzo Zokusebenzelana Kwezentengiselwano Kwebhizinisi - Umthetho Uqinisekisa iDubai
Izinzuzo Zokusebenzisana Nezebhizinisi Ngebhizinisi
Shiya amazwana	/ abameli, Blog, I-Business Law / By Sarah
Ezimweni eziningi emndenini, abantu noma abantu abahlangane nabo bavame ukungena izingxabano noma ukuthethwa kwezomnotho ngesikhathi esithile ekuphileni kwabo ngenxa yezizathu ezahlukene. Iningi labantu lizofuna izeluleko zeqembu labo elingokomthetho futhi livumele ukuthi libhekane nalolu daba. Nakuba ukubonisana ihambisane nemali ebiza ngokwezomthetho, ingabangela izixazululo eziningi zesikhathi eside ezithintekayo futhi yisici sonke ukuhwebelana kwezohwebo. Ukukhulumisana kungaxazulula izinkinga ezinjengezigameko, ukungezwani kwezombangazwe ezindaweni ezahlukene. Esizweni esisungulwe, ukuhwebelana ngokuhweba kusingatha izinkinga ezithinteka emisebenzini yansuku zonke.
I-Mediation ivumela bobabili amaqembu ukuthi akhulume ngokwahlukana kwabo esimeni esilawulwe ngosizo lwabaxhumanisi abaqeqeshwe futhi bafinyelele esiphethweni esizuzayo. Ukuze ube nokuhwebelana okuhle kakhulu kwezebhizinisi kufanele uthole ummeli omuhle ukumela izinkinga zakho bese uqhuba inqubo yonke. Ummeli kufanele azisize nganoma yiluphi udaba oluhlobene nokusebenzisana olungase luvele, abasebenzi abathukuthele nezinye izingxabano emhlabeni wonke webhizinisi.
Ummeli omkhulu kumele abe ngumuntu onamakhono adingekayo ekusizeni ekuxazululeni izinkinga ezinenkani enkampanini noma ebhizinisini. Ummeli kumele abe namakhono enhlangano yebhizinisi ukuze asize umuntu anqume ukuthi angakha inkampani enomkhawulo wemfanelo noma inkampani. Lokhu kubalulekile ekusizeni ukuthi uhlele ibhizinisi lakho futhi ugcwalise amaphepha afanele adingekayo.
Ummeli kumele abe nezinkontileka ezomsiza ukuba aqonde ibhizinisi lakho kahle. Kufanele avele nesisombululo kanye nezinyathelo ezidingekayo okufanele zilandelwe ukuze kuthuthukiswe ibhizinisi lakho. Ngaphambi kokuxoxisana kwezomnotho, ummeli kufanele alungiselele izinkontileka zefomu ezijwayelekile ezidingekayo kumakhasimende, abahlinzeki, namakhasimende ukuxazulula izingxabano uma bevela.
Ummeli kufanele akusize ubhalise amasevisi akho nemikhiqizo yokuvikelwa kwe-copyright noma izimpawu zokuthengisa ezidingekayo ekuxazululeni izingxabano. Kufanele futhi abhalise inkampani ngezinombolo zokuhlonza intela, aqonde imiphumela yentela yohlobo lwebhizinisi osebenzisayo ukuze usethe isisekelo esifanele se-akhawunti yakho. Ummeli kufanele abe nolwazi mayelana nomhlaba ozohlala udinga ukunyatheliswa okuhle nokubhalwe phansi.
Ekuxhumaniseni kwezebhizinisi, udinga ukukhetha uchwepheshe onolwazi kulo ukuphatha amacala okuhweba. Kumelwe ukuba wabhekana namanye amaklayenti ukwazi izindawo zabo ezihlukahlukene ezithakazelisayo, ukuze ugcine konke okusebenzayo uma kuziwa ekubhekaneni nezindaba zomthetho ezandleni ukuze ugweme ukwenza amaphutha. Ummeli omuhle wezebhizinisi uzosiza ibhizinisi lakho liphumelele futhi lisize abaqashi bakho ukuba bagweme izinkinga zomthetho ezingadala umuntu ukuba abe namacala enkantolo noma ukuhwebelana kwezentengiselwano.
Ezinye zezinye izinzuzo zokufuna ukuhanjiswa kwebhizinisi kwebhizinisi lakho zifaka:
Ukukhulumisana kwezohwebo kuyabiza
Ukukhulumisana kwezohwebo kungabizi kakhulu uma kuqhathaniswa nenqubo yomthetho yenkantolo. Kodwa, izindleko zokuhwebelana kwezohwebo zixhomeke kwezinye izinto ezifana nezidingo zamakhasimende, indawo, ubuchwepheshe, kanye nesipiliyoni esikhishwe endaweni yabo ehlukahlukene yomthetho. Kusemthethweni
Ukwenza izinkantolo nezindleko zokuphatha ziphakeme kakhulu uma kuqhathaniswa nokukhulumisana. Ngakho ukuxolelana kwezebhizinisi kuyindleko futhi izinkinga zakho zixazululwa ngokuhle ngamakhono.
Ukukhulumisana kusindisa isikhathi
Ngokucubungula izinqubo ezinzima zenkantolo, kuthatha isikhathi eside ngaphambi kokuba inkantolo ingakhipha isahlulelo ngezinkinga ezihlukahlukene enkampanini. Kukhona inani elikhudlwana lezingxabano eziningi zomndeni nezenkampani ezinkantolo namuhla ezihlala zingenakulinganiswa amashumi eminyaka. Isikhathi sokulinda ekuxhumaniseni kwezomnotho sincane kakhulu, sinethuba elikhulu lokufika esivumelwaneni sokuthula. Abagqugquzeli bokubambisana bezohwebo ukuthola isivumelwano esisebenzayo nesigcina isikhathi eside.
Kudala ubuhlobo obude
Kungakhathaliseki ukuthi kusombulula umndeni, indawo yokusebenzela noma izingxabano zomphakathi ngokusebenzisa inqubo yenkantolo, inqubo njalo iphela ukuhlukumeza ubuhlobo phakathi kwamaqembu amabili. Lokhu kungenxa yokuthi iqembu ngalinye linombono wabo ohlukile futhi imiphumela yenkantolo ingaba nelinye icala, ngaleyo ndlela kubangele ukuqhuma okukhulu phakathi kwabo. Kodwa emisebenzini yokuxoxisana kwezohwebo, bobabili ababambe iqhaza banethuba lokuveza izikhalo zabo ngendlela ehloniphekile futhi kusho ukuthi kunamathuba okulondoloza ubudlelwane noma ukudala eyodwa, uma izinyathelo zixazululwa. Inikeza ithuba lokulondoloza noma yikuphi ukuthakazelisa phakathi kwamaqembu amabili.
Inqubo yokuhwebelana ngokuhweba yenziwa ngendlela esheshayo futhi eguquguqukayo njengoba izinhlangothi zingakwazi ukuzikhethela kumuntu ukuba abe ngumlamuleli, kanye nendawo yokuxoxisana. Ngekhono lokukhetha, amaqembu angakhetha umuntu onolwazi lobuchwepheshe mayelana nokuphathwa kokuphathwa. Ngendlela enobungane yenqubo yokuhweba kwezohwebo, yenzelwe ukuthuthukisa nokuqinisa ubudlelwane bamaqembu amabili ukuze bazuze. Ngokuvamile, ukuhanjiswa kwezebhizinisi kubangela ukubhujiswa okuncane ekuhlotsheni komcimbi. Inqubo iyimfihlo kubo bobabili abathintekayo.
Ukuhlelelana kwezohwebo kwezamabhizinisi kuyashesha, kwezomnotho, kwangasese futhi kuguquguqukayo, kungaholela engqondweni yenveli kanye nezindlela zokudala zokuxazulula izingxabano, amaqembu aqhubeka nokubandakanyeka ngokugcwele emibangweni, ngaleyo ndlela alawule ngendlela azoxazulula ngayo izinkinga zabo kanye nomphumela. Kungenziwa kuhlelwe ngaphakathi kwezinsuku noma amasonto kuye ngokuthi inqubo, ukuhanjiswa kwezentengiselwano kunqunywe inani lemininingwane ehlukana ukusuka kwesinye icala kuya kwesinye.
Ukubhalwa Kwezindatshana Ekolishi
Izindatshana Ziyathengiswa - Izinto Okufanele Uzicabangele Lapho ukhetha Izindiza Ezithengiswayo
Indlela Yokuthola Amaphepha Ashibhile Wokubukeza
UDianosh Dinparvar on Indlela Yokubuyisela Isikweletu Sokuthengisa E-UAE Ngokusemthethweni
UMuhammad Mosharof Hossain on Iyini uMthetho Wokuqasha E-UAE
Marco on Inqubo Yokuhlukunyezwa Kwezidakamizwa ezingekho emthethweni, ukujeziswa kanye nenqubomgomo eDairobi noma e-UAE
Tony on Kwenzekani uma ungabuyiseli imali yokubolekwa kwemali mboleko noma i-credit card e-UAE?
UBijendra Gurung on Kwenzekani uma ungabuyiseli imali yokubolekwa kwemali mboleko noma i-credit card e-UAE?